Akụkọ - Ihe nketa ọgụgụ isi, amamihe na-eduga Ọdịnihu-Guowang Otu Ememe emume ncheta afọ iri abụọ na ise na Wenzhou
Na Nọvemba 23, e mere emume ncheta afọ 25 nke Guowang Group na Wenzhou."Ike-ihe • Ihe nketa • ọgụgụ isi • Ọdịnihu" abụghị naanị isiokwu nke ememe a, kamakwa akara ime mmụọ nke onye ọ bụla Guowang.
The ọgụgụ isi sitere na nchụso na nnọgidesi ike nke àgwà.Afọ iri abụọ na ise nke teknuzu nchekwa na ọdịda bụ naanị ịkụnye mkpụrụ obi nke amamihe n'ime akụrụngwa ma gbanwee amamihe n'ime "ngwaahịa dị elu" nke a pụrụ ịhụ.
Site na obere ụlọ ọrụ OEM na obere obodo ịkụ azụ nke Wenzhou, ruo onye isi na ụlọ ọrụ na-emepụta igwe na-ebi akwụkwọ nke obodo m, naanị ihe na-agbanwebeghị ma gafere bụ "Innovation Technology, Leading Development"."Eziokwu nke ezi obi nke mbụ.
Afọ a bụ ncheta afọ 40 nke mgbanwe na imeghe.Ụlọ ọrụ na-emepụta igwe na-ebi akwụkwọ enwewokwa afọ 40 nke mmepe ngwa ngwa, site na akwụkwọ ntuziaka ruo ọkara akpaaka na-akpaghị aka zuru oke, ma ugbu a ọ na-ebute oge nke dijitalụ na ọgụgụ isi.Dị ka onye akaebe, onye so na onye akaebe nke mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, Guowang Group enyela ike nke ya na mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ.
Dị ka a mba ika, Guowang Group mgbe niile positioned elu-ọgwụgwụ, lekwasịrị anya na nkà na ụzụ nnyocha na mmepe, ifịk ifịk ẹkenam na integrated mba elu technology, ifịk ifịk nakweere ga-eme n'ọdịnihu, na-anabata ọgụgụ isi mmepe nke na-ebi akwụkwọ igwe n'ichepụta ụlọ ọrụ.Anyị na-ahụ na Guowang Group na-eji ike nke ya na-edu ọdịnihu!
Ụmụnna abụọ ahụ n’oge ahụ abanyekwala n’afọ nke obi ike.Ahụmịhe afọ 25, mkpokọta, na mmiri ozuzo ewepụtala uto ha na Guowang Group.
Akụkọ mmepe nke Guowang Group:
Na 1993, ụlọ ọrụ e debara aha na guzosie ike: Ruian Guowang Machinery Factory, na-emepụta mbụ QZ201 akwụkwọ cutter.
Na 1998, Guowang mepụtara onye na-egbutu akwụkwọ hydraulic QZY203AG mbụ.
Na 1999, Guowang mepụtara ụlọ ọrụ nzuzo nke China mbụ QZYX203B cutter akwụkwọ dijitalụ.
N'afọ 2001, Guowang mepụtara onye na-egbutu akwụkwọ na-achịkwa usoro nke mbụ K.
Na 2006, Guowang enyemaka: Wenzhou Olite Machinery Equipment Co., Ltd. e hiwere.
Na 2007, Guowang enyemaka: Shanghai Yiyou Import na Export Co., Ltd. e hiwere.
Na 2008, Guowang gafere German TUV asambodo wee nweta akwụkwọ.
Na 2009, Zhejiang Guowang Machinery Co., Ltd. e kwalite ka China • Guowang Machinery Group Co., Ltd.
N'afọ 2010, a rụchara akụkụ mbụ nke ihe ọkụkụ ọhụrụ Guowang ma bugharịa ya.
N'afọ 2011, Guowang nwetara patent atọ mepụtara, ọtụtụ patent ụdị ọrụ na ọtụtụ nsonaazụ njirimara ngwaahịa ọhụrụ.Enyemaka Guowang: Pingyang Hexin Microfinance Company tọrọ ntọala.
Na 2012, Guowang ghọrọ mba elu-tech enterprise.
Na 2013, Guowang Group na German Baumann Group guzobere njikọ aka Sino-German: Wallenberg Guowang (Shanghai) Machinery Co., Ltd.
N'afọ 2014, China Guowang Group jikọrọ aka na Komori Komori nke Japan iji guzobe mmekọrịta dị mkpa.
N'afọ 2015, Guowang rụpụtara nke ọma wee mepụta igwe na-ebuli elu (igwe na-ekpochapụ labelụ).
Na 2017, anyị mepụtara usoro Toghereigwe na-egbu egbu, bụ nke naanị ụlọ ọrụ 4 mere n'ụwa.
N'afọ 2018, e mepụtara igwe stamping S series dual-unit hot stamping igwe.
Isiakwụkwọ na-egbukepụ egbukepụ na afọ ọganihu, na otuto na afọ
Nke mbụ, Mr. Lin Guoping, Onye isi oche nke Guowang Group, kwuru okwu na ogbo.Site n'okwu Lin Dong, ọ dị ka anyị ahụla afọ 25 dị egwu nke Guowang, nwee ekele sitere n'obi nke Lin Dong, ma cheekwa na otu nwoke Guowang nwere ọrụ ozi na ebumnuche mbụ bụ igwe obibi akwụkwọ na China.Na-enweghị mgbagha na-aga n'ihu okwukwe n'okporo ụzọ nrụpụta!
Ozugbo nke a gasịrị, onye isi oche Guowang Group Lin Guoping, onye isi njikwa Lin Guoqiang, onye isi oche onye isi oche nke China Printing Technology Association Chu Tingliang, osote onye isi oche na odeakwụkwọ ukwu nke China Printing and Equipment Industry Association Wang Lijian, osote onye isi ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ na akụrụngwa akụrụngwa China. Chang Lu Changan, onye isi oche Zhao Guozhu nke ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ Hong Kong, na Chang Xiaoxia, onye isi njikwa nke Beijing Keyin Media and Culture Co., Ltd. bịara na ogbo ọnụ iji malite ememe ncheta afọ 25 nke Guowang Group.
Lu Changan, osote onye isi oche nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ na akụrụngwa China
Ọmarịcha emume mmalite
Na-eduga oru nchekwa na oru nyocha na mmepe ike
Ndị ọbịa bịara nzukọ ahụ gara ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọnụ wee nweta ike teknụzụ na ọgụgụ isi nke Guowang Group.
Njegharị nlegharị anya ụlọ ọrụ agwụla, sochiri mwepụta ngwaahịa ọhụrụ nke Guowang Group yana ọrụ nkọwa teknụzụ ngwaahịa.
Nke mbụ, okwu magburu onwe ya nke Mazi Lin Wenwu mere ka anyị ghọtakwuo amamihe Guowang ma nabata ọdịnihu mgbe oge dijitalụ na ọgụgụ isi na-abịa.
Ihe omume mmalite ngwaahịa ọhụrụ juru n'ọnụ
Dr. Thomas Kollitz, Warrenberg, Germany kwuru okwu
Na Nọvemba 23, emume ncheta afọ iri abụọ na ise nke Guowang bịara dịka akwadoro.Ọnụ, anyị hụrụ mgbanwe nke afọ 25 nke Guowang na mmetụ ahụ Guowang wetara na ụlọ ọrụ ahụ!
Oge nzipu: Ọgọst-09-2021